चिकित्सा शिक्षा आयोगको गैह्रजिम्मेवारीपनको शिकार विद्यार्थी कहिलेसम्म हुनु पर्ने? - Health Chautari Health Chautari
१ चैत्र २०७७, आईतवार २१:४६
चिकित्सा शिक्षा आयोगको गैह्रजिम्मेवारीपनको शिकार विद्यार्थी कहिलेसम्म हुनु पर्ने?
Published on : १ चैत्र २०७७, आईतवार २१:४६
लेखक तथा प्रशिक्षकः माधव भुसाल
लामो सङ्घर्ष पश्चात राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ पास भई सो बमोजिम स्थापना भएको आयोगका पदाधिकारीहरुको अदुर्दर्शीताका कारण १२ कक्षाको परिक्षा पास भएर चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरुलाई अन्यौल भएको छ।
कोरोनाको कारणले गर्दा ढिलो भएको कक्षा १२ को परिक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको ४० दिन कटिसक्दा पनि स्नातक तहको परिक्षाको सुचना अझै सार्बजिनक गर्न आयोगले सकेको छैन। यसबिचमा हेर्ने हो भने छिमेकी देश भारतमा स्नातक तहको सन् २०२० को परिक्षा लिएर पनि २०२१ को सुचना सार्बजनिक गरिसकेको छ।
यसरी हेर्दा, आयोगको रवैयाले नेपालमा विद्यार्थीहरुलाई एक शैक्षिक सत्र नै घाटा लाग्ने लगभग निश्चित जस्तो भईसकेको छ। त्यसो त आयोगको अदुर्दर्शीताका कारण पोस्टग्रयाजुयट (एमडी/एम.एस/एमडिएस) लगायतका अन्य विषयमा पनि कयौँ मुद्दाहरु आयोगले खेप्दै आएको छ। त्यसैले पोस्टग्रयाजुयटको दोस्रो पटकको म्याचिङ्ग पनि पुरा गर्न सकिरहेको छैन।
विद्यार्थीहरुले सुचनाको पर्खाईमा कहिलेसम्म बस्न पर्ने हो? कुनै मेडिकल कलेजको सम्बन्धनकै लागि विद्यार्थीहरुको समय अनि भबिष्य माथि खेलबाड गर्नु जायज हो? यसको जबाफ आयोगका पदाधिकारीहरुले दिनु पर्छ। काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरुले राजीनामा किन नदिने? के आयोगको कल्पना यस्तै लाचारीपन देखाउन र विद्यार्थीहरुलाई अन्यौल कायम गर्नको लागि कल्पना गरिएको हो? यस सम्बन्धमा विद्यार्थी सङ्गठनहरुलाई आवाज उठाउन र यि आवाज नभएका विद्यार्थीहरुको लागि बोलिदिन जोडदार माग गर्दछु।
आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी तत्काल कर्तब्यनिष्ठ भएर नगरे भर्खरै बनेको आयोगको भबिष्य बलियो हुने छैन। तसर्थ, परिक्षाको सुचना तत्काल सार्वजनिक गरेर परिक्षा गर्न आयोगलाई सम्पूर्ण परिक्षा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरुको तर्फबाट आग्रह गर्दछु।
Tags : चिकित्सा शिक्षा आयोग माधव भुसाल